🥇 ▷ Perkz iyo Caps G2 inay isdhaafsadaan khadadka LEC 2020 Spring Split ✅
Perkz iyo Caps G2 inay isdhaafsadaan khadadka LEC 2020 Spring Split
Haa, kani waa mid rasmi ah: G2 Esports ayaa mar kale beddelaya qorshihiisa. Dhaawaca Perkovic “Perkz” wuxuu ku laaban doonaa khadka dhexe, halka Rasmus “Caps” Winther uu bedeli doono booskiisa ADC ee khadka bot.
Mid ka mid ah aasaasayaashii G2 Esports, Carlos “ocelote”, Rodríguez Santiago ayaa warkan ku xaqiijiyay waraysi uu siiyay ESPN.
“Taasi waxba kama shaqeynayso labadaas, xaaladaas waa ay fiicantahay, waxaan heysanaa xagaaga xagaaga oo iyaguna waa ay isbadali doonaan. Markaa waxaan heysanaa faa iidada maskaxda haatanna waa waxa dhabta ah: waa bilaabataa. Ama markaa waa shaqeysaa iyo waxa waxaan dooranay, waxba ma ogaan doonaan halka ay u socoto. Taasi waa xaalada ugu fiican. ”
Awoodda G2 marwalba waa dabacsan tahay. Dhammaan xubnaha kooxda waa shaqsi aqoon sare leh, sidaa darteed waxay asal ahaan ku ciyaari karaan waxkastoo door ah. Inbadan, waxay jah wareeraan xilalkoodii hore waxayna guuleystaan ​​guul weyn. Perkz wuxuu ka soo dhaqaaqay dhexda una socday bot, waxaana la keenay koofiyado si loo buuxiyo booska xarunta. Oo bal qiyaas maxaa? Waxay gaareen finalka adduunka, waxayna ahaayeen kooxda ugu fiican Yurub.
In kasta oo ay runtii la yaab tahay in arrimuhu is beddeleen, Perkz iyo Caps ayaa inbadan joojiyay. Hubi feedhkaaga Twitterka Waxaadna arki doontaa tilmaam ku saabsan isdhaafsiga, oo markii hore calaamadiyay kaliya su’aalo sababtoo ah kooxda caanka ah ee ficil iyo kaftan.
Koofiyadaha kaliya ayaa baabi’iyay rekkles-ka khiyaanooyinka maanta jira waxay noqon doonaan sanad wanaagsan
Luka (@ G2Perkz) Janawari 12, 2020
Iyaga oo adeegsanaya xirfadaha shaqsiyadeed ee kooxda, isku beddelka liiskan wax khatar ah kuma keenayso wax qabadkooda LCC 2020 Qeybta Gu’ga. Haddii ay jiraan wax, waxay noqon kartaa dib u dejinta maskaxeed ee ay u baahan yihiin inay ku guuleystaan ​​oo ay horumariyaan iyagoo ka shaqeynaya inay gaaraan Bariga Caalamka. sanadka. Ma sugi karno si aan u aragno sida ay u shaqeyso.